FJKM Ankadindramamy Fahazavana » TORITENY 2020 – Alahady 19 aprily
Alahady 19 aprily 2020
TORITENY 2020 – Alahady 19 aprily
Natao ny 19 Avr 2020, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona
Finaritra e ! Ho amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana’i Jesoa Kristy Tompontsika.
Mbola tsy misokatra ny Trano Fiangonana. Indro atolotra antsika ny fandaharana amin’ny fanompoam-pivavahana iombonana amin’ny Alahady 19 Aprily 2020 ho avy izao any amin’ny isan-tokantrano. Manokana fotoana, handinihina ny Tenin’Andrimanitra, mazotoa mivavaka fa ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.
Ezahina hatrany anolotra ho antsika ny « raki-peo » mirakitra izao fanompoam-pivavahana izao. Mirary soa hatrany.
Hoy Atoa RAKOTONDRASOA Harijaona Andriatsarafara, Mpitandrina mianakavy.
( Alahady voalohany manaraka ny Paska )
FANDAHARANA ( Endrika faharoa )
1. Hira : FF 5
2. Fiarahabana Apostolika
3. Fiderana an’Andriamanitra
• Salamo 40. 1 – 5
• Hira : FF 7
• Vavaka fiderana
4. Fankalazana ny Tenin’Andriamanitra
• Hira : 808
• Dimy minitra an’ny Sekoly Alahady
• Vavaka fangatahana ny Fanahy Masina
• Vakiteny ( Daniela 12. 1 – 3 ; Lioka 24. 44 – 49 ; Asa 2. 29 – 38 )
• Ry Ray Masina o ! manamasina anay amin’ny Fahamarinana
5 Vavaka fangatahana …
6 Hira : 142
• Hira : FF 26
9 Hira : 734 ( Hira vavaka ho an’ny Firenena )
DIMY MINITRA AN’NY SEKOLY ALAHADY
Ndeha hojerentsika ny Nahoma 1. 7 : : « Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin’ny andro fahoriana, ka mahalala izay mialoka Aminy » ( averintsika vakiana indray mandeha ary e !! )
– Fantantsika moa izany atao hoe : « fiarovana » izany ?
Fiarovana dia fitaovana entina miaro amin’ny hetraketraky ny fahavalo, na koa fiarovana amin’ny loza miseho. hisakanana ny fanafihana ataon’ny fahavalo. Rehefa mafy ny fiarovana dia azo antoka fa tsy ahakasika ny fahavalo.
Andriamanitra araka izany eto no fiaroavana amin’ny fahavalo ka azo antoka ny fiainan’izay mialoka Aminy.
– ary ny atao hoe : «andro fahoriana » ?
Andro fahoriana dia andro andalovana fitsapana, na ady sarotra, ady mety mahakasika ny aina. Ohatra amin’izany a ! ity aretina mandoza Corona virus ity. Tena andro mahory ho an’izao tontolo izao. Miteraka fahafatesana olana maro ; tena andro mahory izany.
– Izao anefa an !!! manana an’Andriamanitra fiarovana mafy ho antsika amin’ny loza sy ny fahavalo. Raha manaiky hialoka eo Aminy isika. Miantoraka Aminy dia azo antoka ny famonjena antsika.
Indro misy tantara kely ho mifandray amin’izany Tenin’Andriamanitra izany :
Indray andro nifofofofo be ny rivotra, ho avy ny orana. Tao anaty ala indro voron-kely nandalo fahasahiranana. Tsy tafiditra tao amin’ny akaniny. Noho ny rivotra mifofofofo dia tsy tafa-petraka teny amin’ny hazo. Nopahonan’ny rivotra mivezivezy etsy sy ero. Tamin’izay indrindra indro nisy lehilahy iray niditra tao amin’izany ala izany. Avy hatrany ity voron-kely dia niantoraka teny an-tratran’io lehilahy io. Voaaro tamin’ny fifofofofon’ny rivotra izy, tonga azo antoka ny fiainany.
Tsarovy fa toa izany koa isika ankehitriny. Noho ny zava-misy tsy mahita izay iantorahana, itadiavana famonjena. Tsarovy fa eo mandrakariva Andriamanitra Raintsika. Raha miantoraka Aminy isika. Raha mametraka ny fiainantsika eo Aminy isika dia azo antoka ny fiainantsika. Ho tsara fiaroavana isika. Eny vonona ny handray antsika mandrakariva Izy.
Ndeha averina indray ny Tenin’Andriamanitra teo hoe : « Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin’ny andro fahoriana, ka mahalala izay mialoka Aminy » ( Nahoma 1. 7 )
Lioka 24. 44 – 49 no Tenin’Andriamanitra andraisana hafatra hifampaherezantsika amin’ity Alahady voalohany manaraka ny Paska ity. Ity Lioka 24. 44 – 49 ity maneho hatrany ny toe-javatra niainan’ny mpianatra tamin’ny andron’ny Paska fotoana nananganan’Andriamanitra an’i Jesoa Kristy, Ilay Kristy nitsangana tamin’ny maty.
Nanao ahoana tokoa moa ny zava-misy ?
– Nanambara ny zavatra hitany sy izay fanambaran’ny anjely ny vehivavy ( tsy nino ny mpianatra )
– Nijery ny fasana i Petera, nahita ny lamba paty mipetraka mitokana : gaga
– Ireo roalahy nandao an’i Jerosalema ho any Emaosy nisehoan’i Jesoa Kristy velona teny an-dalana ka indreo niverina tany Jerosalema nilaza tamin’ny mpianatra namany fa tena nitsangana tamin’ny maty tokoa i Jesoa Kristy efa nahita azy izy roalahy. Tao anatin’izany fotoana nisehoan’ny fitantarana samihafa izany no indro i Jesoa Kristy mitsangana eo afovoan’ny trano ( trano mihidy kanefa tafiditra Izy ) manonona FIADANANA ( Fiadanana ho anareo ). Tsy tafapaka tamin’ny fon’ny mpianatra ny FIADANANA notononina satria mbola nanarona ny fon’izy ireo ny TSY FINOANA ka ny TAHOTRA no namatotra ( noheveriny fa matoatoa i Jesoa Velona )
Manoloana izany toe-javatra rehetra izany no nahatonga an’i Jesoa Kristy itarika ireto mpianatra mba ho tonga ho amin’ny finoana marina fa tena velona tokoa Izy, tena nandresy ny fahafatesana tokoa Izy mba ahatonga ireto mpianany afaka hijoro ho vavolombelon’izany fandreseny ny fahafatesana izany. Tanjon’i Jesoa Kristy amin’izao fisehoany izao dia mba ho MARINA AMIN’NY FINOANA NY MPIANANY.
Ndeha ho jerentsika ankehitriny ary ny MPINO MARINA AMIN’NY FINOANA
1. Mandinika ny Soratra Masina
Miresaka amin’ny mpianany i Jesoa Kristy ilay velona, Ilay nitsangana tamin’ny maty fa tamin’ny fotoana niarahany tamin’izy ireo dia efa nampianatra Izy, efa nilaza ny amin’izay toe-javatra tsy maintsy hiseho eo amin’ny fiainany Izy. Niseho tokoa izany, nosamborina, nohombohona tamin’ny hazo fijaliana, maty, nalevina ary nitsangana tamin’ny andro fahatelo Izy. Ny mpianatra no tsy nahatsiaro ny fampianarany.
Manoloana izany dia namerina nampianatra azy ireo indray i Jesoa, nampahatsiahiviny fa ny fiainany, ny toe-javatra rehetra nihatra Taminy dia efa voarakitra ao amin’ny Soratra Masina ( Lalan’i Mosesy, Mpaminany, Soratra ). Hoy ny and.45 … . Zava-misy dia efa nahita ny mason’ny mpianatra, efa nitsapa ny tananany ( and.31 ; and.39… ). Tena ilaina ny fisokafan’ny sain’izy ireo mba ho tena resy lahatra amin’izay ambaran’ny Soratra Masina mahakasika an’i Jesoa Kristy, ny fiainany, ny Iraka nanirahan’Andriamanitra Rainy Azy.
Tsy ho tonga amin’ny finoana marina ny mpianatra fa tena nitsangana tamin’ny maty tokoa i Jesoa, tena mifanaraka amin’ny Soratra Masina tokoa izany niseho teo amin’ny fiainan’i Jesoa Kristy rahatsy avy amin’ny fandinihina, fianarana ny Soratra Masina irery ihany. Tsy ho fantatra tokoa ny maha-Izy Azy an’i Jesoa Kristy rahatsy ao amin’ny Soratra Masina irery ihany. Mifamatotra amin’izany ny voalazan’i Jesoa Kristy tamin’ireo Jiosy niresaka Taminy voalaza ao amin’ny Jaona 5. 39,40 ….
Ry havana malala, raha te-ho tonga amin’ny finoana marina isika, te-ahafahantatra marina ny fiainan’i Jesoa Kristy dia tarihina mba handinika mandrakariva ny Soratra Masina. Ny olona tsy ampy fahalalana ny Soratra Masina no mora voarebirebin’ny fampianaran-diso// ny filazana na fitantarana samihafa miseho eo amin’ny fiaraha-monina. Eny raha te-ho vavolombelona tena mahatoky tokoa isika dia tarihina ihany koa mba handinika, handalina ny Soratra Masina eo ambany fitarihin’ny Fanahy Masina mba hitombo amin’ny finoana sy ho marina amin’ny finoana. Izay ambaran’ny Soratra Masina irery ihany no aoka hinoantsika mba hampiorenana ny finoantsika sy hifikirantsika amin’Andriamanitra Raintsika.
Isaorantsika ny Tompo Jesoa fa niova ny fiainantsika efa ho iray volana izao. Nandao ny asa am-draharaha, mijanona ao antrano noho ny COVID-19. Araraoty ny fotoana omen’ny Tompo anao mba handinihinao indray ny Soratra Masina mba hitombo amin’ny finoana ianao ka tsy hatahotra manolona ny zava-misy. Hatoky ianao fa efa nandresy ny fahafatesana i Jesoa Kristy Tompo ka afaka mampandresy anao.
2. Mitaona ny hafa handray ny famonjena
Hoy ny voasoratra ao amin’ny and.46 – 47 …. Rehefa avy nampiorina ny finoan’ny mpianany i Jesoa Kristy dia milaza, manamafy indray ny anton’ny fijaliany, ny fiaretany, ny fahafatesany, ny fitsangananan’ny tamin’ny maty izay toe-javatra tsy azo afenina, tsy maintsy toriana mba ho famonjena ho an’ny olombelona rehetra. Izany hoe rehefa marina amin’ny finoana ny mpianatra, resy lahatra fa velona marina i Jesoa Kristy dia anjaran’izy ireo ny manambara izany amin’ny hafa fa io no loharanom-pamonjena ho an’ny olona rehetra.
Io Jesoa Velona io no iantsoana ny olona mba hibebaka ka handray famelan-keloka. I Jesoa no voahombo tamin’ny Hazo fijaliana no lalam-pomonjena tokana ho an’ny olona rehetra, I Jesoa no nisolo voina ny mpanota, i Jesoa nitsangana tamin’ny maty no mamafa ny fahotana, manadio ny lotom-pahotana, I Jesoa Kristy nitsangana tamin’ny maty no naneho an’Andriamanitra fa Izy no Tompon’ny Hery sy ny fahefana rehetra ka miantso ny olona hanatona Azy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, mitaona ny olona hiala, handao ny andriamani-kafa, handao ny hery hafa izay mety ho nianteherana teo amin’ny fiainana.
Mitaona ny olona hisafidy an’Andriamanitra tokana Rain’i Jesoa Kristy irery ihany hotompoina sy ivavahana. Ny Herin’Andriamanitra irery ihany no ianteherana eo amin’ny fiainana. Antsoina noho izany ny olona, fa io Jesoa nitsangana tamin’ny maty io irery ihany no nanehoan’Andriamanitra ny fitiavany hamonjy izao tontolo izao. Izay mibebaka, mino ka manatona Azy no mandray famelan-keloka. Eny mandray ny famonjena notanterahin’i Jesoa Kristy teo amin’ny Hazo fijaliana sy ny fitsanganan’ny tamin’ny maty.
Mazava araka izany fa rehefa marina ny finoanan’ny mpianatra dia afaka manatanteraka izany fijoroana ho vavolombelona izany, Afaka mitaona ny hafa handray ny famonjen’Andriamanitra izy ireo. Eny ny olona marina amin’ny finoana dia tonga fantsom-pamonjena ny hafa amin’ny fiainany ny finoana eo amin’ny fiaraha-monina misy azy.
Ry havana malala, tsarovy ny Tenin’i Jesoa Kristy hoe « Izay mino Ahy, ny asa ataoko no ataony koa » ( Jao 14. 12 ). Tsarovy ary fa ny olona manana finoana marina, mino fa ao amin’i Jesoa Kristy irery ihany no ahazoana ny famonjena dia manaiky ho iraky ny Tompo hitory sy hanambara izany. Ireo mpianatra nanana finoana marina dia nahajoro tamin’izany ( Asa 2. 32 – ….- 38 ). Antso ho anao ankehitriny, vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino. Miteza ianao mba ho tena vavolombelona hanambara amin’ny hafa fa ao amin’i Jesoa Kristy irery ihany no famonjena azo antoka.
3. Manovo hery ao amin’Andriamanitra mandrakariva
Hoy ny and.48-49 …. Maniraka ny mpianatra ho vavolombelony i Jesoa Kristy. Vavolombelona hitory ny famonjena. Mialohan’ny hiaingana hanaovana ny asa fanompoana anefa dia misy toro-marika omen’i Jesoa eto and.49… Midika izany fa tsy mandeha amin’ny herin’ny tena na ny fahalalana fotsiny fa mila ny Hery avy amin’Andriamanitra.
Hery avy amin’ny avo izay tsy inona fa entina ilazana ny Fanahy Masina, araka ny voalaza ao amin’ny Asa 1. 8 manao hoe : ….. Izany hoe mampanantena ny mpianatra i Jesoa Kristy fa omen’Andriamanitra ny Fanahy Masin aizy ireo mba ahafahany manatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara. Omen’Andriamanitra ny Fanahy Masina ny mpianatra mba ho afaka hijoro ho vavolombelon’i Jesoa Kristy nitsangana tamin’ny maty.
Mazava araka izany fa na dia eo aza ilay finoana marina, finoana fa velona, nitsangana tamin’i maty i Jesoa Kristy, na dia eo aza ny fahalalana ny Soratra Masina milaza ny fiainan’i Jesoa Kristy dia mila manovo ny Hery avy amin’Andriamanitra ny mpianatra ahafahany mijoro ho vavolombelon’i Jesoa Kristy. Eny mila ny Fanahy Masina hameno sy hitarika, hanolontsaina mandrakariva mba ahombiazana amin’ny asa fanompoana, tsaroana eto ny Tenin’i Jesoa Kristy ao amin’ny Jaona 15. 26 – 27 ….
Ry havana malala. I Jesoa Kristy dia mahafantatra fa tsy mora ny asa anirahany ny mpanaradia Azy eo amin’izay fijoroana ho vavolombelony, eo amin’izany fanambarana ny filazantsaran’ny famonjena. Na dia marina amin’ny finoana azy ny mpino, na dia manana ny Tenin’Andriamanitra dia tsy mahazo miantehitra amin’ny heriny sy ny fahalalany fa mila miantehitra amin’ny Herin’Andriamanitra. Tena mila ny Fanahin’Andriamanitra hitarika mandrakariva. Ilay Fanahy Mpampahery, ilay Fanahy Masina Mpampianatra. Antoky ny fahombiazan’ny asa fitoriana ny filazantsara ny fanekena hotarihin’ny Fanahy Masina. Hita taratra teo amin’ny fiainan’ny mpianatra tamin’ny asa fitoriana ny filazantsara nataony ( Jereo Boky Asan’ny Apostoly ). Mangataha ny Fanahy Masina, meteza hofenoina ny Fanahy Masina dia ahita fahombiazana amin’ny asan’ny Tompo isika.